केआई सिंहको सिंहदरबार विद्रोहका प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्ः 'सँगैको साथी ढल्दा भाग्यले बाँचें' “मर्ने र बाँच्ने ठेगान छैन, यो पैसा मेरो घरसम्म पुर्‍याइदिनु होला ।” पैसाको थैली थमाउँदै उसले मलाई ठेगाना लेखिएको कागज दियो । म त अक्क न बक्क भएँ । कति पैसा थियो, हेर्दा पनि हेरिनँ । पछि थाहा भयाे, ऊ डा. केआई सिंहले सिंहदरबार कब्जा गर्दा टुँडिखेलबाट लडेको नेपाली सेनाको सिपाही रहेछ ।
कहाँबाट थाल्ने कृषिमा सुधार ? कसरी टिकाउने किसानलाई ? खेती कर्मबाट खान नपुगेपछि धेरै किसान पलायन भएर शहरदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगेका छन्। अहिले तिनै युवालाई फर्काएर बाँझो जमीन फोर्न लगाउने बहस आकर्षक सुनिए पनि हाम्रो सबै संरचना र खेती प्रविधि यथावत् नै राखेसम्म कृषिमा सुधारको कुरा कोरा गफ मात्रै हो।
‘चमत्कारले निको हुँदैन कोरोनाभाइरसको महामारी’ तिब्बती बौद्ध समुदायका अध्यात्मिक नेता दलाई लामा भन्छन्, “संसारका कैयन युद्ध र विनाशकारी विपत् जस्तै यो महामारीको पनि अन्त्य छ । वश, हामीलाई जीवनप्रति आशा जगाइराख्न र शान्त रहन आवश्यक छ ।”
‘प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! अध्यादेशकै कारण यति छिटै पार्टी एकता भयो’
'बन्दाबन्दीमा कुकुर, बाँदरलाई खाना खुवाएर गम्भीर गल्ती गरिरहेका छाैं' बन्दाबन्दीमा भोकाए होलान् भनेर हामीले दया-माया गरेर बाँदर, कुकुरजस्ता जनावरलाई खाना खुवाइरहेका छाैं । तर यसाे गर्नु हाम्राे गम्भीर गल्ती हाे ।
कोरोना कहर यसरी बन्‍न सक्छ रुपान्तरणको अवसर कोरोनाभाइरस महाव्याधीले सिर्जना गरेको अवसरलाई हामीले तत्कालिक संकट समाधान र दीर्घकालीन सुधारका लागि सदुपयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि एउटै शर्त हो, सामूहिक प्रयत्न।
“सरकार र नागरिकबीच सेतुको काम गर्छौं” : डा.बाबुराम भट्टराई 'कोरोना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहल, नेपाल' राज्य र नागरिक बीच सेतुको भूमिकाका लागि गठन गरिएको हो । याे स्वयंसेवी भावनाले हामी नागरिकको भूमिका पनि छ भनेर नागरिक तहबाट गरिएको ‘पब्लिक इनिसियटिभ’ हो ।
बन्दाबन्दीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई परेको समस्या कसले बुझ्ने ? आम रुपमा राहत भन्नाले दाल, चामल, नुन-तेल जस्ता खाद्यान्न सामग्रीलाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ। तर अपांगता भएका विशेष गरी स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका, बौद्धिक अपांगता भएका महिलाहरुका लागि त्योभन्दा बढी डाइपर, प्याड र विभिन्न औषधिको आवश्यकता पर्छ। जुन राहतको सूचीमै पर्दैन।
महामारीका जोखिम नियन्त्रणतिर आउन थाल्यो भन्नेबित्तिकै परीक्षा हुन्छ, विद्यार्थी तयार रहनुस्: शिक्षामन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता) "विद्यालय तहका ७० लाख विद्यार्थी घरमा छन्। विद्यार्थी र अभिभावक दुवै मिलेर बन्दाबन्दीको यो समयलाई राम्रो कामको लागि सदुपयोग गर्नुपर्छ।"
आखिर इम्युनिटी हो के ? इम्युनिटी शब्द ल्याटिन भाषाको इम्युनिस वा इम्यनिताज बाट आएको हो । ल्याटिनमा ‘इम्युनिस वा इम्यनिताज’को अर्थ अरुको दासता वा प्रभावबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको स्थिति वा आफूलाई स्वतन्त्र गराउने क्रिया हुन्छ ।
कोरोनाको 'इपीसेन्टर' न्यूयोर्कमा नेपालीः सेल्फ क्वारेन्टिन असम्भव एउटै कोठामा ३/४ जना पनि बस्ने भएकाले सेल्फ क्वारेन्टिन बस्ने भन्ने संभव देखिंदैन । ज्याक्सन हाइट्समै बस्ने अनिल लिम्बूको ११ चैतमा कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भयो । सार्वजनिक यातायातहरु धेरै प्रयोग हुने भएकाले पनि जोखिम भयो, दुई हप्ता अघिसम्म हामी नै त्यहीं खोचाखोच ट्रेनमा यात्रा गरेर काममा आवतजावत ग-यौं ।
महामारीको अन्त्य नभएसम्म... ! विगतका महामारीहरूका अध्ययनका आधारमा भन्ने हो भने, अबको झण्डै ६ महीनामा कोरोनाभाइरसको महामारी पनि मत्थर हुनेछ । तर, यो अवधिमा आफू र अरुलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व अरु कसैको होइन, केवल तपाईं–हाम्रै हो ।
“शब्द लकडाउन भनिए पनि कर्फ्यू नै हो” – अहिलेको अवस्था फरक हो, विश्वले नै कल्पना नगरिएको संक्रमण एक्कासी यति छिटो फैलिरहेको छ । विश्वका ठूला धनी देशहरुमा स्वास्थ्य सेवा कति बलियो होला तर, पनि संक्रमणले सताइरहेकै छ । हामीले पनि रातारात जोखिम न्यूनीकरणको पहल थालेको हो ।
‘कालोबजारी गर्नेले सन्त्रास फैलाए’ कोरोना भाइरस महामारीका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख ध्रुव घिमिरे भन्छन्, “कर्मचारीको अभावमा सोचेजति बजार अनुगमन हुनसकेको छैन।”
'काठमाडौंले बाहिर पनि सामथ्र्य छ भन्ने ठान्दैन’ संघीय पुनर्संरचना अनुसार स्थापित प्रदेश सरकारहरूले काम शुरू गरेको दुई वर्ष पुगेको छ। सुस्त कार्यसम्पादन र विकासलाई गति दिन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको भनी प्रदेश सरकारहरूमाथि आलोचना भइरहेको छ। तर प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्यस्तो आलोचना गलत भएको बताउँछन्। संघीय संरचना र प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
रजोनिवृत्ति प्रजनन् क्षमताको अन्त्य हो, यौन जीवनको होइन - डा. विश्वबन्धु शर्मा, मनोचिकित्सक रजोनिवृत्तिमा एस्ट्रोजिन कम हुँदै जाने भएकाले स्वस्फूर्त प्रजनन् अङ्गहरू सुक्खा र कमजोर हुन थाल्दछन् । केही महिलामा यौनेच्छामा कमी पनि आउन सक्छ । तर, यो नै यौन जीवनको अन्त्य भने होइन ।
'आफ्नै शरीर बुझिएन' ती तीन महीना त सम्झँदा पनि अत्यास लाग्छ । दैनिकी नै अर्कै भएको थियो, अत्यधिक रक्तस्रावले होला, टाउको निकै दुख्थ्यो, वेलावेला चक्कर लागे जस्तै भइरहन्थ्यो । मान्छे देख्यो कि झर्को लाग्ने, कुरै गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने ।
'छोराले भनेपछि पो थाहा पाएँ !' मध्यरात झसङ्ग ब्युँझदा खलखली पसिना आइरहेको रहेछ । पुसको जाडोमा यो के भएको होला ? म छक्क परें । एकछिनपछि भने शीताङ्ग भयो ।